Qaaraankani ugu danbeeyay ee USAID ayaa waxaa ka mid ah bariis, badar, saliidda khudaarta laga sameeyay, iyo cunto gaar ah oo loogu talagalay dadka ay dilatay nafaqo-darrada, waxaa intaasi sii dheer caarar iyo lacago kaash ah oo ay dadka cunto uga soo iibsadaan suuqyada maxalliga ah.
Kaalmadan ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah gargaar dhanka nafsaaniga ah oo loogu talagalay bulshooyinka ay saameeyeen colaadaha iyo sidoo kale hoow xaaladaha deg degga ah, biyo, nadaafad iyo kaalmooyinka fayo-dhowkra.
Macaawinadaan dheeraadka ah ayaa kusoo beegantay xilli xasaasi ah, iyada oo ay Qaramada Midoobay qiyaastay in dad ka badan 35 milyan oo ruux oo ku nool Galbeedka Africa ay wajahi doonaan cunto yari xilliga soo socda. Xilliga u dhaxeeya beerashada iyo gurashada beeraha ee bilaha May iyo August markaas oo caadiyan ay bulshooyinkaasi cuntada ka dhamaato, gaar ahaan dadka beeraleyda ah.
Gobolka Saaxil, waxa xaaladda uga sii daray dalag-la'aanta jirta iyo saamaynta colaadaha ee sii wada xaalufinta kaydka cuntada iyo agabka qoyska. Tani waxay keentay in in ka badan 20 milyan oo qof ay u baahdaan gargaar cunto. Lake Chad Basin waa aag ku yaalla Galbeedka Afrika wuxuuna daboollaa dalalka Cameroon, Chad, Niger iyo Nigeria.
12-ki sano ee lasoo dhaafay colaado ay kiciyeen kooxo mintidiin Islaami ah sida kooxaha argagixisada Boko Haram iyo ISIS-West Africa ayaa natiijadi ka dhalatay ay keentay in dad gaaraya 11.1 milyan oo ruux ay si aad ah ugu baahdaan kaalmo bani’aadannimo. ku dhawaad saddex milyan oo qof ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka cararaan, iyagoo aanan heysan hooy, biyo nadiif ah iyo nadaafadda aas-aasiga ah iyo sidoo kale dhibaato cunto yari oo aad u daran.
Dowladda Mareykanka ayaa ku yaboosday oo bixisay in ka badan $944 million oo gargaar ah ah oo loogu talagalay mandiqadda Lake Chad Basin iyo Sahel oo isku xiran, taasoo la bixiyay laga soo billaabo October 2020.
Si loo caddeeyo sida ay uga go'an tahay Maamulka Biden ee kordhinta wada shaqaynta iyo la shaqaynta Afrika, USAID waxay dhawaan ka qaybgashay shirweynihii saddexaad ee sanadlaha ah ee Isbahaysiga Saaxil oo markii ugu horreysay ay xubin buuxda ka noqotay. Xaaladdan buuxda ee xubinnimada waxay bixin doontaa fursado cusub oo lagula shuraakoobayo deeq-bixiyeyaasha, kuwa gaarka ah iyo dawladda martida loo yahay si ay u caawiyaan xoojinta horumarinta iyo dadaallada dib u habaynta ee Saaxil. Mareykanka ayaa sii wadi doona raadinta habab uu wax uga qabto baahiyaha bini'aadantinimo ee sii kordhaya ee Galbeedka Afrika.